“မိုးမိုးရဲ့ Challenge ခေါ်တာကို လက်ခံပြီး စံချိန်ချိုး အနိုင်ပိုင်းလိုက်တဲ့ တိုင်ရွန်ရဲ့ Challenge ဗီဒီယိုဖိုင်လေး” - Cele Connections
“မိုးမိုးရဲ့ Challenge ခေါ်တာကို လက်ခံပြီး စံချိန်ချိုး အနိုင်ပိုင်းလိုက်တဲ့ တိုင်ရွန်ရဲ့ Challenge ဗီဒီယိုဖိုင်လေး”
အက်ရှင် ဇာတ်ကြမ်း၊ အနု၊ ကျရာဇာတ်ရုပ်အလုိုက် ကာရိုက်တာကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသားချော တိုင်ရွန်ကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်..။ ဇာတ်လမ်းတွဲများနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကို လှုပ်ခတ်စေခဲ့သလို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာလည်း ကျရာ နေရာကနေ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသားတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်..။ အမိုက်စား ဘော်ဒီကောက်ကြောင်းကို သဘောကျပေမယ့်လို့ ကာရိုက်တာအရ ဘော်ဒီပုံစံကို ပြောင်းလဲဖို့အတွက် Gym ကစားတဲ့သူပါ..။
တိုင်ရွန်ကတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အညီနေထိုင်ပြီး အမြဲတမ်း လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ဆောင်ကာ နေတတ်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်…။ ဒီနေ့ ဧပြီ လ(၅)ရက်နေ့မှာတော့ မိုးမိုးရဲ့ Plank Challenge (၂)မိနစ်နေရမယ့် Challenge လေးကို စံချိန်ချိုးလုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို “ကို Moe Sithu Kyaw ရဲ့ plank challenge လေးကို accepted လုပ်ပါတယ် …….( 6) mins (2)sec ရပါတယ် …… နောက်နေ့ ဒီ စံချိန်ကို ကိုယ်တိုင်ပြန်ကျော်ဖို့ကြိုးစားမှာပါ…. မည်သူမဆိုပါဝင်နိုင်ပါတယ်….” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်..။
မိုးမိုးခေါ်တဲ့ Challenge စံချိန် (၂)မိနစ်ကို ချိုးကာ (၆)မိနစ် (၂)စက္ကန့်ထိ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ တိုင်ရွန်ကတော့ ဒီလောက်နဲ့မရပ်ဘဲ နောက်နေ့မှာလည်း သူ့ရဲ့ စံချိန်ကို ထပ်ချိုးဖို့ အပျင်းပြေလုပ်ဆောင်ဦးမှာပါတဲ့နော် ပရိသတ်ကြီး..။ Cele Connecitons ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း တိုင်ရွန်ရဲ့မိုးမိုး Challenge လေးကို လက်ခံပြီး စံချိန်ချိုးလိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။
Source: Tyron Bejay’ s Facebook
“မိုးမိုးရဲ့ Challenge ချေါတာကို လကျခံပွီး စံခြိနျခြိုး အနိုငျပိုငျးလိုကျတဲ့ တိုငျရှနျရဲ့ Challenge ဗီဒီယိုဖိုငျလေး”
အကျရှငျ ဇာတျကွမျး၊ အနု၊ ကရြာဇာတျရုပျအလိုကျ ကာရိုကျတာကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ မငျးသားခြော တိုငျရှနျကိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျ..။ ဇာတျလမျးတှဲမြားနဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးကို လှုပျခတျစခေဲ့သလို ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှမှောလညျး ကရြာ နရောကနေ အကောငျးဆုံး သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ မငျးသားတဈလကျပဲဖွဈပါတယျ..။ အမိုကျစား ဘျောဒီကောကျကွောငျးကို သဘောကပြမေယျ့လို့ ကာရိုကျတာအရ ဘျောဒီပုံစံကို ပွောငျးလဲဖို့အတှကျ Gym ကစားတဲ့သူပါ..။
တိုငျရှနျကတော့ ကနျြးမာရေးနဲ့ အညီနထေိုငျပွီး အမွဲတမျး လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ လုပျဆောငျကာ နတေတျတဲ့သူပဲဖွဈပါတယျ…။ ဒီနေ့ ဧပွီ လ(၅)ရကျနမှေ့ာတော့ မိုးမိုးရဲ့ Plank Challenge (၂)မိနဈနရေမယျ့ Challenge လေးကို စံခြိနျခြိုးလုပျဆောငျလိုကျတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို “ကို Moe Sithu Kyaw ရဲ့ plank challenge လေးကို accepted လုပျပါတယျ …….( 6) mins (2)sec ရပါတယျ …… နောကျနေ့ ဒီ စံခြိနျကို ကိုယျတိုငျပွနျကြျောဖို့ကွိုးစားမှာပါ…. မညျသူမဆိုပါဝငျနိုငျပါတယျ….” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ..။
မိုးမိုးချေါတဲ့ Challenge စံခြိနျ (၂)မိနဈကို ခြိုးကာ (၆)မိနဈ (၂)စက်ကနျ့ထိ လုပျဆောငျနိုငျခဲ့တဲ့ တိုငျရှနျကတော့ ဒီလောကျနဲ့မရပျဘဲ နောကျနမှေ့ာလညျး သူ့ရဲ့ စံခြိနျကို ထပျခြိုးဖို့ အပငျြးပွလေုပျဆောငျဦးမှာပါတဲ့နျော ပရိသတျကွီး..။ Cele Connecitons ပရိသတျကွီးအတှကျလညျး တိုငျရှနျရဲ့မိုးမိုး Challenge လေးကို လကျခံပွီး စံခြိနျခြိုးလိုကျတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော..။
“ချစ်ရတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရွှေထူးကို အနမ်းလေး ပေးကာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေကြတဲ့ ရွှေမှုန်ရတီရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်”
“အောင်လရဲ့ ကိုယ်တိုင် ဆံပင်ဆေးဆိုးပေးကာ ဂရုစိုက်မှုလေးတွေကြောင့် ပျော်မဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း”